Kiiniya oo kordhinaysa goobaha ay Somalida kaga qaadayso cashuurta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Kiiniya ayaa sheegtay inay kordhinayso goobaha ay dhiganayso cashuur qaadista ayadoo u badinaysa xad beeneedka labada dal iyo weliba xuduudaha sadexda dal ee Itoobiya, Kiiniya iyo Somaliya.
”Xadka noo dhexeeya anaga iyo Somaliya waa mid iska furan oo leh meelo badan oo aan dhigan karno cashuur ururin ayaa lagu yiri qoraal lagu balaadhinayo goobaha Kiiniya cashuurta kaga guranayso Somalida.
Somalida ayaa bixisa cashuurta ugu badan Kiiniya waxayna Nayroobi ka degan yihiin xaafad biyo iyo dhooqadu meel kasta fadhiistaan oo nadaafadeedu aad u leedato iskaba dhaaf gobolka NFD. ”Cashuurta nalaga qaado xaafadaha Kiiniyatiga ayaa lagu dhisaa ayuu yiri Axmed Dheere.
Si kastaba ha ahaatee Somaliya oo Kiiniya qayb weyn ku leedahay inayna cagaheeda ku istaagin ayaa lagu eedaynayaa inay ka dambeyso doorashada raagtey, dhinaca kalana aan urursan wax cashuura haba yaraatee.